WARBIXIN: 10-kii Saxiix Ee Ugu Xumaa Premier League Ee Suuqii Xagaaga Oo La Soo Saaray – Kooxda.com
HomePremier LeagueWARBIXIN: 10-kii Saxiix Ee Ugu Xumaa Premier League Ee Suuqii Xagaaga Oo La Soo Saaray
July 10, 2020 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 0
Furitaanka suuqa kala iibsiga xagaaga ayaa dib loo dhigay ilaa inta uu ka dhamaanayo xilli ciyaareedkan iyada oo tartamada yurub la dhamaystiri doono dhamaadka bisha August.
Sida caadiga ah bisha July ayaa ahaan jirtay bil uu furanyahay suuqa kala iibsiga xagaaga iyada oo la hadal hayn jiray saxiixyada laakiin waxa haatan diirada la saarayaa dhamaystirka xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan.
Suuqii xagaaga ee la soo dhaafay ayaa u muuqda mid aad u fog iyada oo ay ka soo wareegtay wax ku dhaw muddo 11 bilood ah.
Waxa la ciyaaray xilli ciyaareedka oo ay ka mid yihiin 34 kulan oo premier League ah wargayska Daily Star ayaana soo saaray Liiska 10-ka saxiix ee ugu xumaa ee ay kooxaha Premier League sameeyeen xagaagii la soo dhaafay.
1.David Luiz, Arsenal:
Inkasta oo ay Gunners kaliya 8 milyan kula soo saxiixtay Luiz hadana xiddiga ayaa jeebka kaga shubtay Arsenal lacag dhan 24 milyan oo euro sanadkii uu joogay kooxda.
Luiz ayaa kordhiyay heshiiskiisa waxana uu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u xun isaga oo sabab u noqday in laga dhaliyo goolal badan oo sabab u noqday in ay dhibco badan.
2.Joao Cancelo, Manchester City:
Xiddiga garabka midig ee daafaca ka ciyaara ayaa lacag weyn ugu soo biiray Etihad Staduim waxana uu ku fashilmay in uu boos ka helo xiddiga Kyle Walker.
Cancelo ayaa kaliya City u ciyaaray 11 kulan oo horyaalka ah marka loo eego in ay City ka soo bixisay 55milyan oo euro waxana ay u muuqataa in uuna xidiga reer Portugal waxba dhaamin Danilo oo uu ku dhaafsaday Juventus.
3.Tanguy Ndombele, Tottenham:
Ndombele ayaa shaki la’aan ah xiddiga ugu tayada badan ee ku jira Liiska waxa uu ka mid noqday saxiixyada ugu xun ee premier League.
Xiddiga ayaa 55 milyan ugu soo biiray kooxda Tottenham laakiin xiddiga ayaa wakhti adag ku qaadanaya kooxda iyada oo ay isku dheceen tababarhaa kooxda waxana uu kooxda u fadhiyaa kaydka kulamo badan.
5.Wesley, Aston Villa
6.Andre Gomes, Everton
7.Che Adams, Southampton
8.Danny Welbeck, Watford
9.Roberto, West Ham
10.Patrick Cutrone, Wolves
Sii Akhriso: Dowlada Federaalka Somalia Oo Xil Muhiim Ah Ka Qabatay Xidhiidhka Jaamacada Carabta Markii Ugu Horaysay 37 Sano Kadib
Real Madrid Oo Garaacday Deportivo Alaves Talaabo Kale Oo Muhiim Ahna U Qaaday Ku Guulaysiga Horyaalka La Liga.